Yese Email Kushambadzira Iyo Sizzles Haisi Spam | Martech Zone
Iyi infographic kubva LeadPages, mumwe kumhara peji mhinduro, Inopa imwe nzwisiso huru mukushambadzira kweemail uye huwandu hweSPAM Kiyi yeiyi infographic ndeye mangani maemail epamutemo anokwira mumhepo junk. Mikana ndipo pane vazhinji vako, zvakare.
Mvumo-yakavakirwa email inoenderera ichitungamira iyo pakiti mune inoshamisa yekudzvanya-kuburikidza uye kutendeuka mitengo. Saka mabhizinesi mazhinji ari kuisa simba ravo rese mukutsvaga nzira dzekufambisa traffic yakawanda zvekuti vanokanganwa nzira dzekutapa vashanyi izvo chaizvo akaita ita kuti ive saiti. Wedzera fomu yekunyorera kuti ugone kutora avo vashanyi vanofarira, uye sundidzira mameseji kwavari kana mukana ukamuka.
Uye kana iwe ukagadzira uye uchitumira iwo maemail, shandisa aya akanakisa maitiro.
Isu tiri vanobatana neLeadPages uye ndiyo yedu yekubatanidza mune ino posvo!
Tags: eEmail Marketingjunk emailjunk foldaspam
Nhungamiro yeHoridhe kuMobile Kushambadzira
Whitepaper: Maitiro Ekufungidzira Magetsi Anowedzera Sei Mitero Yekutendeuka
Douglas, Chinyorwa chinonakidza. Nekuva nezvakanaka zvemukati, Yakanaka Chinyorwa tambo uye yakajeka Kufona kune Chiito kunogona kuita mutsauko wese. Email icharamba iri yakachipa pashiri yekushambadzira.